परिचित छ जो कुनै पनि खेलाडी multiplayer खेल, थाह के "डट"। सुरुमा यो Warcraft3देखि एक सानो शाखा, बोल्न त, फैशन एक प्रकारको थियो। त्यो त पूर्ण आवेदन मा वृद्धि कि धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरियो। यो उत्प्रेरणा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल को टाढा एक हो, तर के त्यहाँ - सबै दुनिया भर! प्रत्येक पारित दिन संग Recruits संख्या बढ्छ। यी मानिसहरू को सबै मा संग्रह र उपकरण खरिद प्ले केही विकास केही कठिनाइ र विशेष छन्। एक बरु कठिन र बौद्धिक गेमप्लेको घटक - को "Dota 2" सबै कलाकृतिहरू पछि। आज हामी आफ्नो प्रजाति र प्रमुख भेटघाट सामना गर्नेछ।
हामी किन चाहिन्छ?
को पाठ्यक्रम, कि वस्तुहरूको आवश्यक बिना यो असम्भव युद्धमा, र फलस्वरूप म्याच जीत छ। बल, चपलता, बुद्धि, क्षति वा हतियार: प्रत्येक टुक्रा कुनै पनि संकेतक वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ। केही कलाकृतिहरू सम्भव जादू देखि उदाहरण, अस्थायी सुरक्षा को लागि, एक निश्चित फाइदा दिने युद्धमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न बनाउन। -, को Dodgers (खैर, सबै कुरा स्पष्ट छ) र sorcerers (आधारलाइन - बुद्धि) ट्यांक (बल प्राथमिक विशेषता): सामान्य मा, "Dota 2" मा सबै वर्ण3व्यापक वर्गमा विभाजित छन्। यो आधारमा, यो खरिद वस्तुहरू मुख्य प्यारामिटर स्तरवृद्धि गर्ने प्रत्येक प्रकार को लागि उचित छ। कलाकृतिहरू "Doté" advantageously धेरै भागहरु (5 2) बाट संकलित। यो वस्तुहरूको अधिक महंगा, बलियो हुनु नायक हुनेछ भनेर स्पष्ट छ।
को "Dota 2" सबै कलाकृतिहरू विशिष्ट प्रकार मा विभाजित छन्:
पहिलो र सस्ता - उपभोज्य वस्तुहरू। यो औषधि, मानयो र स्वास्थ्य, कुरियर, धूलो, रत्न, धूल, र यति मा सबै प्रकारका समावेश छ। छोटो मा, सबै कुरा खर्च गर्न सकिन्छ।
विशेषताहरु वृद्धि। यी बुद्धि, बल वा हतियार प्रदर्शन वृद्धि वस्तुहरूको लागत समावेश गर्नुहोस्। यस्तो कुराको भविष्यमा थप कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी कलाकृतिहरू संकलन गर्न सकिन्छ। को "Dota 2" मा छैन आफ्नो पैसा सुरक्षित, यस्तै वस्तुहरू उपेक्षा गर्न सकिँदैन। खेल प्रारम्भिक चरणमा, तिनीहरूले अस्तित्व र अनुभव को एक उत्कृष्ट माध्यम हो। कसरी "Dota 2" मा कलाकृतिहरू संकलन गर्ने जानकारी को लागि, तपाईं सीधा स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्छन्, बस चासो को वस्तु मा बायाँ-क्लिक गर्नुहोस्। यसको सृष्टिको स्क्रिन रेखाचित्र तल्लो बायाँ कुनामा, साथै जानकारी बारेमा मा कुराहरू यस उद्देश्यका लागि आवश्यक छन्।
प्राथमिक हतियार। आइटम सामान्य आक्रमण को सानो क्षति, र वृद्धि हतियार (शारीरिक प्रतिरोध वा जादू क्षति) को यस्तो वृद्धि।
जादुई कुराहरू। यी कुराहरू, स्वास्थ्य पुनर्जनन र मानयो पुनर्जनन बढाउन सक्छ आक्रमण गति वृद्धि, vampirism दिन वा hapless शत्रु खोक्रो बच।
सबै वर्ण लागि आधारभूत कलाकृतिहरू। तिनीहरूले नियम, अघिल्लो खण्डहरू देखि केही आइटम संग, धेरै संकेतक संयोजन थपिएका छन्।
प्रविधी समर्थन कुराहरू। सम्पूर्ण टोली मदत गर्न हीरो अत्यधिक खेल "Dota 2" मा मानिन्छ छन्। तिनीहरूलाई लागि कलाकृतिहरू, त्यसैले मा वरपर धेरै वर्ण को उपचार, जादू ढाल, ठूलो मानयो पुनर्जनन को कुल ओभरले र को लागि अभिप्रेरित नियम, रूपमा।
नायक, न्यूनतम गर्न प्रतिद्वन्द्वीको स्वास्थ्य कम गर्न वा बस नष्ट छोटो अवधिमा सक्षम - casters लागि वस्तुहरूको। यी विभिन्न समावेश जादुई वस्तुहरू, चुपचाप क्षमता, तीव्र जादुई हडताल र तीव्र आन्दोलन दिने।
दुर्लभ हतियार र हतियार। यो नायक अविश्वसनीय शक्ति र क्षति दिंदा खेल मा कलाकृतिहरू सबैभन्दा महंगा र उच्च गुणस्तरीय कक्षाहरू को एक छ। यस्तो वस्तुहरू सामान्यतया leytovyh वर्ण (सबै भन्दा राम्रो कुरा को श्रेष्ठता लागि आवश्यक छन् जो) को लागि खरिद छन्।
वस्तुहरूको विशेष। यस्तो कलाकृतिहरू "Doté 2" सामान्य आक्रमण अन्तर्गत अनुदान vampirizm, शत्रु हतियार दहन मानयो सम्भावना maim कम र शत्रु र यति मा सुस्त। सिर्जना गर्न केही कुराहरू गोप्य दोकान जहाँ तपाईं आवश्यक घटक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ हिंड्न गर्न आवश्यक छ।
"द Settlers: एक साम्राज्य को उत्थान": खेल को वर्णन, कोड धोखा
खण्डमा "मेट्रो Redux।" खेल समाचार मेट्रो Redux, समीक्षा
पैड postpartum: के किन्न राम्रो छ? राम्रो postpartum पैड: समीक्षा, मूल्यहरू
Anticoagulants - लागूपदार्थ रगत clotting असर
कसरी प्लास्टिक बोतल मा प्याज बढ्न?
सोभियत शहरी योजना पन्ने: «टावर Vulyh"
Hepatitis सी तपाईं कसरी प्राप्त गर्छन् र के गर्न सकिन्छ, कि हुँदैन गर्नुभयो
क्रिस्टोफर Nolan: Filmography र निर्देशक गरेको सर्वश्रेष्ठ फिलिम
पारदर्शी ठोस: उत्पादन प्रौद्योगिकी
जोरजियन ब्रांडीको - विशेष स्वाद संग एक जटिल पेय